Akpụkpọ ụkwụ ịkpụ akpụkpọ ụkwụ bionic na-enweghị atụ - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd.
Akpụkpọ ụkwụ ịkpụ akpụkpọ ụkwụ bionic na-enweghị atụ
Akpụkpọ ụkwụ na-arụ ọrụ dị mkpa na ndụ mmadụ. Na mgbakwunye na ichebe ma na-ekpo ọkụ, akpụkpọ ụkwụ ga-enwerịrị ọrụ ọzọ dị mkpa -- mgbochi mkpọchi.
Ndị nyocha na Massachusetts Institute of Technology (MIT) na Harvard University kọrọ na nso nso a na ha mepụtara ihe akpụkpọ ụkwụ biomimetic nke na-agbanwe ịgbanyụ ọkụ, na-ewere mmụọ nsọ site na ụmụ anụmanụ.
Anụmanụ na-eme ụdị dị iche iche na okike, na ụdị ụfọdụ etolitela akụkụ pụrụ iche iji mee ka ọ dịkwuo mma na gburugburu ha, dika nkpokoro nke cheetahs na umu nnunu na –ebi ije, na akpịrịkpa nke agwọ. N'ọnọdụ ụfọdụ, ihe owuwu a pụrụ iche nwere ike inyere anụmanụ aka ịbawanye esemokwu ma jidesie ihe ma ọ bụ ala ike.
Site n'ike nke a, ndị nchọpụta ahụ mepụtara ihe na-esighi ike dị ka usoro agwo, na-eru na nka nke mpempe akwụkwọ. Mgbe onye we biri jụ, ọ naghị ahụ ihe ọ bụla; Ma n'oge ije, ịkpụ aka na ụkwụ na-akpali akwara, nke na-abawanye esemokwu na ala ma belata ihe ịmafe.
Ejiri ígwè mee ihe ọkpụrụkpụ dị 0.051mm na modulus nke na-eto eto bụ 193GPa. Ndị ọrụ nyocha ahụ hapụtara ụdị akpa atọ dị iche iche wee nwalee ha na ice, plastik na osisi siri ike. Ngwurugwu triangular nkịtị na-enye naanị mgbalite esemokwu esemokwu, ebe ebuka ebula gosiri nke kachasị elu. Ọzọkwa, mmetụta mgbochi skid nke naanị ya bụ ihe kachasị dị na ice, na static esemokwu coefficient na-abawanye site 7 ugboro na ike mgbanwe esemokwu coefficient na-abawanye site 14 oge atụnyere ihe ndị na-abụghị skid.
Na omume, n'ihi na onye ọ bụla nwere obere dịtụ iche, mmetụta mgbochi skid nke aka ya ga-adịtụ iche. Ndị ọrụ nyocha na-achọ nha atọ ahụ, ibu dịtụ nnwale afọ ofufo, Ha yi akpụkpọ ụkwụ bionic na ndị ọzọ maka azụmaahịa na-enwe ụdị akpụkpọ ụkwụ dị iche iche nke antiskid (e.g., akpụkpọ ụkwụ ugg, akpụkpọ ụkwụ egwuregwu, Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ nkịtị) jee ije na ice, nsonaazụ gosiri na akpụkpọ ụkwụ bionic nwere ike welie esemokwu ahụ n'ụzọ dị irè, ọnụọgụ esemokwu bụ okpukpu abụọ nke ngwa ahịa.
Nchoputa ohuru a na-eleba nsogbu nke ndi mmadu na - eji nway oo akwa ebe enwere ike itinye ya bu n of ime uwe ndi na - adighi nma n'uzo., gburugburu mmiri ma ọ bụ mmiri na-egbu. Otú ọ dị, mmetụta ya na-egbochi skid na paịlị nkịtị (dika iberibe nzu, wdg) na ịba uru na ndụ kwa ụbọchị ka ga-enyocha.
| ndaeyo ebe a, ka anyị nweta textiles dị mma!
Akpụkọọk eletaghachi na-arụ ọrụ ọhụụ, ọ bụghị naanị ire ọkụ na-ala azụ, kamakwa nwere ike mkpu!